Izinzuzo ezi-10 eziphezulu zezeMpilo ze-Glutathione Supplement Zakho - I-Wisepowder
Izinzuzo Eziyishumi Eziphezulu Zezempilo ze-Glutathione zomzimba wakho
Izinzuzo ze-Glutathione izinto eziphilayo ngezindlela eziningi ngokusebenza njenge-antioxidant. Kuyinhlanganisela ye-amino acid ekhona kuwo wonke amaseli omuntu. Yonke into ephilayo ine-glutathione emzimbeni wayo. I-antioxidant enamandla okuthi uma ikhona emazingeni anele ingasivikela ezimeni zempilo eziyingozi njengesifo i-Alzheimer's, isifo senhliziyo, kanye nokushaywa unhlangothi.
Yize le antioxidant ikhiqizwa emangqamuzaneni emizimba yethu i-glutathione ingafakwa emzimbeni wethu, ifakwe kahle, noma njenge-inhalant.
I-Glutathione iyinhlangano eyakheke ngokuhlanganiswa kwama-amino acid amathathu: i-cysteine, i-glutamic acid, ne-glycine, iyi-antioxidant enamandla evimba futhi ibambezele ukuguga kwamaseli. IGlutathione ivimbela ukulimala kwamangqamuzana futhi ikhiphe amakhemikhali ayingozi esibindini futhi inamandla okuzibopha kwizidakamizwa ezisiza umzimba ukuwakhipha kalula. Iphinda futhi yenze umsebenzi obalulekile wokuqinisa ukungasebenzi komzimba kanye nokulawula ukukhula kanye nokufa kwamaseli emzimbeni wethu. Amazinga we-glutathione aqaphelekile ukuthi anciphise ngokuguga.
1. Ikhipha ukucindezelwa kwe-oxidative
Lapho ukukhiqizwa kwama-radicals kwamahhala emzimbeni kukhuphuka, futhi umzimba ungakwazi ukukulwa nakho, kuphumela ekucindezelekeni oku-oxidative. Amazinga aphezulu okuxineka okuvela ku-oxidative ashiya umzimba uthinteka ezimeni zezokwelapha ezinjengoshukela, isifo samathambo kanye nomdlavuza. I-Glutathione isiza ukudambisa uxinzelelo lwe-oxidative olusiza umzimba ukugwema lokhu kugula.
Izinga eliphakeme le-glutathione emzimbeni laziwa nangokuthi likhuphula izinga Antioxidants. Lokhu kukhuphuka kwama-antioxidants kanye ne-glutathione kunciphisa ukucindezela kwe-oxidative.
2. Kwangathi kungathuthukiswa impilo yenhliziyo
IGlutathione, ngamandla ayo okuvikela i-oxidization yamafutha emzimbeni womuntu, ingasiza ekunciphiseni izehlakalo zokuhlaselwa yisifo senhliziyo nezinye izifo zenhliziyo. Izifo zenhliziyo zibangelwa ukuqokelelwa kwethala elingelakhekile ngaphakathi kogange lwezindawo eziphakemeyo.
I-low-density lipoproteins (LDL), noma i-cholesterol embi, ibangela i-plaque ngokulimaza imithambo yangaphakathi yemithambo yegazi. Lezi zinkundla ziyaqhuma futhi zingavimba imithambo yegazi, ziyeke ukuhamba kwegazi futhi zibangele ukuhlaselwa yinhliziyo noma imivimbo.
IGlutathione, kanye ne-enzyme ebizwa ngokuthi yi-glutathione peroxidase, inqoba ama-superoxides, i-hydrogen peroxide, ama-radicals mahhala kanye ne-lipid peroxides ebangela i-lipid oxidation (i-oxidation yamafutha). Lokhu kuvimbela i-cholesterol embi ukuba ilimaze imithambo yegazi futhi ngenxa yalokho ukwakheka kwe-plaque. Ngakho-ke i-Glutathione isiza ukwehlisa ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nezinye izifo zenhliziyo.
3. Kuvikela amaseli wesibindi ezifundweni ezinesibindi nesinamafutha
Lapho kunokushoda kwama-antioxidants kanye ne-glutathione, amangqamuzana amaningi wesibindi athambekele ekufeni. Lokhu kunciphisa amandla esibindi okulwa nesibindi esinamafutha kanye nezifo zesibindi sotshwala. IGlutathione, uma ikhona emazingeni anele ivame ukukhuphula amazinga wamaprotheni, i-bilirubin, nama-enzyme egazini. Lokhu kusiza abantu ukuthi balulame ngokushesha ezifweni zesibindi ezinamafutha nezidakayo.
A phezulu umthamo we-glutathione ukuphathwa ngokulingene kubantu abanezifo zesibindi ezinamafutha kukhombisa ukuthi i-glutathione iyindlela ephumelela kunazo zonke yokwelapha lesi sifo. Kubonise nokuncipha okukhulu kweMalondialdehyde, umaki wokulimala kweseli esibindini.
I-glutathione ephethwe ngomlomo nayo ikhombisile ukuthi i-antioxidant ibinomphumela omuhle kubantu abahlushwa isifo sesibindi esingewona utshwala.
4. Isiza ukulwa ne-inflation
I-inflation ingenye yezimbangela ezinkulu zezifo ezinkulu njengezifo zenhliziyo, isifo sikashukela nomdlavuza.
Ukulimala kubangela ukuthi imithambo yegazi endaweni elimele inwebeke ukuze ivumele igazi eliningi ukuthi ligobhoze endaweni. Leli gazi ligcwele amangqamuzana omzimba agcwele le ndawo ukuvimba noma yikuphi ukutheleleka. Lapho indawo elimele iphulukisa, ukuvuvukala kuyancipha futhi namaseli omzimba anciphise inani. Kepha emzimbeni ongenampilo othinteka yingcindezi, ubuthi, ukudla okungenampilo ukuvela kwe-inflation ngeke kwehle ngokushesha lokho.
I-Glutathione iyasiza ezimweni ezinjengalezi ngokuqinisa amaseli amhlophe angasebenzi mzimba. Balawula inani lamaseli amhlophe abaya endaweni elimele ngokuya ngobukhulu bokukhuphuka kwalokhu.
5. Kuthuthukisa ukumelana ne-insulin
Njengoba sikhula amazinga e-glutathione emizimbeni yethu ehla njengoba umzimba wethu ukhiqiza kancane futhi kancane i-glutathione. Lokhu kuphumela kokuncane ukushiswa kwamafutha emzimbeni wethu. Ngakho-ke umzimba ugcina amafutha amaningi. Lokhu futhi kwandisa amathuba okuba ne-insulin.
Ukudla okunyusa izinga le-cysteine ​​ne-glycine kuzokhulisa ne-glutathione yokukhiqiza emzimbeni wethu. Lokhu kuba khona kwe-glutathione ephezulu kusiza ekuphikiseni i-insulin enkulu kanye nokushiswa kwamafutha aphezulu.
6. Iziguli zesifo se-vasipheral sezibona ukuhamba okuthuthukile
Isifo se-peripheral artery sihlukumeza abantu abanemithambo yegazi evalekile yi-plaque. Lesi sifo sithinta kakhulu imilenze yomuntu. Lokhu kwenzeka lapho imithambo yegazi evinjiwe ingakwazi ukunikeza inani legazi elifunekayo emisipha lapho izicubu zilifuna. Umuntu ngamunye ohlushwa yisifo semithambo yegazi esiyitholayo uzozwa ubuhlungu nokukhathala lapho ehamba.
I-Glutathione, ekhishwe ngokuhlinzwa kabili ngosuku, ikhombise ukuthuthuka okuphakeme ezimeni zabo. Abantu bebodwa bakwazi ukuhamba amabanga amade futhi abaze bakhalaza ngobuhlungu.
7. I-Glutathione yesikhumba
Izinzuzo ze-Glutathione zibuye zande nokugcina isikhumba siphilile futhi siselapha. Umqubuko, ukoma kwesikhumba, i-eczema, imibimbi, kanye namehlo aphambili kungalashwa ngomthamo ofanele we-glutathione.
Ukusetshenziswa kwe-glutathione yesikhumba kuvimbela i-tyrosinase, i-enzyme ekhiqiza i-melanin. Ukusetshenziswa kwe-glutathione isikhathi eside kuzoholela esikhunjeni esilula ngenxa yokukhiqizwa kwe-melanin engaphansi. Kuboniswe futhi ukuthi kunciphisa i-psoriasis, ukuthuthukisa ukuqina kwesikhumba, kanye nokunciphisa imibimbi.
8. Kunciphisa izimpawu zesifo sikaParkinson
Ukulimala kungenye yezimpawu abantu abahlupheka ngazo Isifo sikaParkinson imvamisa uhlushwa yi. Lokho kungenxa yokuthi lesi sifo sihlasela isimiso sezinzwa esiyinhloko. Ukuphathwa okungaphakathi kwe-glutathione kukhombise ukuthuthuka kubantu abavela kulesi sifo. Ukwelashwa kunciphise ukuzamazama nokuqina ezigulini ezingaphansi kokubhekwa. Kukholakala ukuthi i-glutathione ingenza impilo ibe lula kulabo abaphethwe yisifo sikaParkinson ngokunciphisa izimpawu ezivezwa yisifo.
9. Isiza izingane ezizimele ngokwehlisa umonakalo we-oxidative
Izingane ezine-autism zikhonjiswa ukuthi zinokuphakama okuphezulu kokulimazeka okukhona oxidin ebuchosheni bazo. Ngasikhathi sinye, amazinga we-glutathione aphansi kakhulu. Lokhu kwandise ingozi yokuthi izingane ziqhubekisele phambili ukulimala kwemizwa ngamakhemikhali afana ne-zebaki.
Izingane eziphathwe ngomlomo nange-topical glutathione dosage zikhombise ukuphuculwa okuphawulekile kumazinga we-plasma sulfate, cysteine, kanye ne-glutathione. Lokhu kunikeza ithemba lokuthi ukwelashwa kwe-glutathione kungathuthukisa ukusebenza kwengqondo futhi ngenxa yalokho, izimpilo zezingane ezine-autism.
10. Kungasiza ukulwa nezifo ze-autoimmune
Izifo ezizimele zihlanganisa isifo se-celiac, i-arthritis ne-lupus. Lezi zifo zidala ukuvuvukala okungapheli nobuhlungu okwandisa ukucindezeleka kwe-oxidative. IGlutathione ingalawula impendulo yomzimba ngokuyivuselela noma ngokunciphisa. Lokhu kunikeza odokotela ukuthi banciphise ukucindezeleka okwenziwa yi-oxidative kubantu abahlupheka ngenxa yokuphazamiseka komzimba.
Izifo ze-Autoimmune zibhubhisa i-cell mitochondria kumaseli athile. I-Glutathione isiza ukuvikela i-cell mitochondria ngokulwa nama-free radicals. IGlutathione ivusa amaseli amhlophe namaseli ama-T alwa nokutheleleka. Amaseli we-T anqunywe yi-glutathione akhombisa amandla akhulayo okulwa nokutheleleka ngamagciwane kanye namagciwane.
Njengoba umzimba ukhula, amazinga e-glutathione emzimbeni ancipha. Sidinga ukudla ukudla okuzosiza umzimba ukuthi ubuyisele amazinga e-glutathione. Ukudla okuningi okuqukethe ama-glutathione ngokwemvelo noma ama-glutathione akhulisa umsoco.
Ukuya kokudla kwe-glutathione kuya, iprotey ye-Whey iqukethe i-gamma-glutamylcysteine. Lokho kungukuhlanganiswa kwe-glutathione ne-cysteine ​​okwenza kube lula ngomzimba wethu ukuhlukanisa ama-amino acid amabili. Bobabili bangama-antioxidants amahle.
· Ukudla kwe-Allium
Ama-supplements we-glutathione amahle angukudla okuvela ezitshalweni zezinhlobo ze-Allium ezicebile ngesibabule. Isibabule sisiza umzimba wethu ukukhiqiza i-glutathione yemvelo ethe xaxa. I-anyanisi, ugarlic, ama-scallion, amashizi, amadevu, kanye namakhekhe kungukudla okungokwalolu hlobo lwe-allium.
· Imifino ye-Cruciferous
Imifino ye-Cruciferous iqukethe ama-glucosinolates azothuthukisa amazinga we-glutathione emzimbeni wakho. Kungakho izitshalo ezithwala le imifino zinephunga elicolekile.
Iklabishi, ikholifulawa, i-broccoli, i-kale, i-bok choy, i-brussels ihlumela, i-arugula, i-radishes, i-watercress, kanye nemifino ye-collard yonke imifino ebethelwe.
· Ukudla kune-alpha-lipoic acid
Inkomo, inyama yomzimba, isipinashi, imvubelo yotshwala, notamatisi yizithasiselo ezinhle ze-glutathione njengoba zicebile i-alpha-lipoic acid. Le acid ivuselela futhi ikhuphule amazinga ama-glutathione emzimbeni wakho.
· Ukudla okucebile kwaseSelenium
Njengomkhondo we-mineral selenium usiza umzimba ekwandiseni amazinga e-glutathione namanye ama-antioxidants emzimbeni. Ukudla okuqukethe i-selenium yi-oysters, ukudla kwasolwandle, amaqanda, amantongomane we-brazil, i-asparagus, amakhowe, nezinhlamvu eziphelele.
Izithasiselo ze-Glutathione eze ngezindlela ezahlukahlukene. Zingathathwa ngomlomo. Kodwa i-glutathione ethathwe ngomlomo ayisebenzi kangako ekugcwaliseni amazinga womzimba wekhompiyutha.
Indlela engcono yokuthatha isengezo se-glutathione ukuthatha i-liposomal glutathione esiswini esingenalutho. Isithako se-glutathione esebenzayo sikhona enkabeni yama-liposomes. Ukuthatha lesi sithasiselo ngomlomo kuyindlela engcono yokwandisa izinga lomzimba le-glutathione.
I-Glutathione nayo ingangeniswa nge-nebulizer ekhethekile. Kepha uzodinga umuthi wokusebenzisa wona.
Ama-transdermals kanye ne-lotion ayatholakala angafakwa ngaphezulu. Izinga labo lokutholwa lihlukahluka futhi kwesinye isikhathi lingathembeka.
Ukuphathwa kwe-Intravenous kuyindlela eqondile kunazo zonke yokuthatha i-glutathione supplements. Futhi kuyindlela ehlaselayo.
Imiphumela emibi ye-Glutathione
I-Glutathione supplementation inemiphumela emibi kakhulu. Lokhu kungaqala ukuqhakaza. isikhumba esiswini, igesi. Izitulo ezikhululekile, kanye nokuphendula okungaba khona. Kungcono ukubonana nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha izithasiselo ze-glutathione.
Umthamo we-glutathione odingekayo kumuntu ungahluka kubudala bomuntu, isisindo, kanye ne-physiology. Kungancika futhi esimweni sempilo yakhe nasemlandweni wezokwelapha. Kungcono uthintane nodokotela wakho ukubheka ukuthi imuphi umthamo wesengezo okufanele uwuthathe.
I-Glutathione yi-molecule ebalulekile emizimbeni yethu. Kuyinto enamandla i-antioxidant futhi isiza umzimba ukuthi ulondoloze isheke kuma-radicals wamahhala. Lokhu kusigcina siphilile kanye nezigceme zezifo ezinjengezinkinga zenhliziyo, umdlavuza nokuhlaselwa yisifo senhliziyo.
Kubalulekile ukugcina izinga elilungile le-glutathione emizimbeni yethu. Kunezindlela ezahlukahlukene esingakwenza ngazo lokho. Singadla ukudla okucebile kwe-glutathione, sithathe i-glutathione ngomlomo, sikusebenzise ngokuphezulu sithola ukuphathwa kahle ngaphakathi.
Funa izeluleko zezokwelapha noma nini lapho uthatha isinqumo sokuthatha ama-glutathione supplements ukuze uguqule izinga lawo emzimbeni wakho.
URouhier N, uLemaire SD, uJacquot JP (2008). "Indima ye-glutathione ezintweni eziphilayo ze-photosynthetic: imisebenzi evelayo yama-glutaredoxins ne-glutathionylation". Ukubuyekezwa Kwaminyaka Yonke Kwe-Biology Yezitshalo. 59 (1): 143-66.
UFranco, R .; ISchoneveld, OJ; IPappa, A .; IPanayiotidis, MI (2007). "Indima esemqoka ye-glutathione ku-pathophysiology yezifo zabantu". Izinqolobane Zokulondolozwa Kwemvelo kanye ne-Biochemistry. 113 (4–5): 234-258.
2020-06-06 ibeimon supplements